Uma iziprofetho zigcwaliseka, yilokho bufakazi bokuthi izinkolelo zakho ziyiqiniso? : UMartin Vrijland
Uma iziprofetho zigcwaliseka, yilokho bufakazi bokuthi izinkolelo zakho ziyiqiniso?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-17 Juni 2019	• 24 Amazwana
Abafundi abaningi babona ukugcwaliseka kweziprofetho njengesibonakaliso sokuthi izinkolelo zabo zilungile. Kulabo abangenasithakazelo enkolweni, ngifuna ukusho: cabanga futhi, ngoba wonke amazwe ezombusazwe asekelwe ezinkolelweni zenkolo. Uma ungakuboni lokho, umane awuzange unake. Kungani umbuso wakwa-Israyeli wasungulwa, kungani amaJuda amaningi aye ePalestine, kungani iTump yamemezela iJerusalema inhloko-dolobha ka-Israyeli ngonyaka odlule futhi kungani esho ukuthi iGolan Heights ikwa-Israyeli? Ngezizathu ezingokwenkolo futhi akukho okunye okunye. Izisusa zenkolo zihlangene kuzo zonke izinhlangano ezinkulu zezombangazwe emhlabeni jikelele.
Uma ngabe kukhona okwenza uchungechunge oluvamile ezinkambisweni ezinkulu, empeleni awuhlakaniphile ngempela uma ungafuni ukubona leyo intambo evamile noma ngisho nokuyiphika. Inkolo yinto okumelwe siyiqaphele kakhulu, ngoba iyisici esiqondisayo ezombusazwe zomhlaba. Yakha i-aorta yazo zonke izinqubo zezombusazwe esingazibona zizungezile nsuku zonke. Kungenzeka uzikhethele ukuthi awufuni ukuba unkolo noma wenkolo, kodwa ukuphika ukubaluleka kwenkolo emhlabeni wonke kunjengokuphika ukuthi i-70% yomhlaba ihlanganiswe ngamanzi.
Ngakho-ke uma ususe ikhanda lakho enhlabathini ngokuphathelene nenethonya elibalulekile lenkolo ezombusazwe zezwe, khona-ke singabona ukuthi iyiphi indima. Uma uyifundisisa ngokujulile, ungathola ukuthi osebenza nabo abaningi, omakhelwane noma obaziyo baxabisa iziprofetho; noma yiziphi izinkolelo abazenzayo. Lokhu kusho ukuthi singaphetha ngokuthi abantu baqiniseka ngokugcwele ukuthi lezi ziprofetho sezigcwalisekile noma zizogcwaliseka. Ngakho-ke uma izigidi zabantu zikholelwa kuleso simo, kungase kudingeke ukuba uzinake, ngoba uma ungenjalo, umane nje uyingcosana. Amabhiliyoni abantu bakholelwa ukuthi kuyoba khona umesiya, ukuthi kuyoba ne-anti-Christ, nokuthi kuyoba nempi yokuphela kwesikhathi seJerusalema. Ukwazi nje ukuthi ungakwazi ukuqonda ukuthi kungani, isibonelo, iJerusalema libaluleke kangaka ohlelweni lwezinhlangano eziningi zezombusazwe. Kungenye indaba uma ungathathi isikhathi sokuhlola lezo zindaba ngoba ukhetha ukuhlanganyela ekuphumeni, ukusebenza, ukukhokha izikweletu, isinkwa nemidlalo, njalonjalo. Ngombono wami, kubalulekile (noma kunalokho: kubalulekile) ukuhlola lezi zinto. Kungani? Ngoba ngenxa yalokho uqonda ukuthi kwenzekani nokuthi kuphi 'okuya khona'.
Ngiye ngathola ukusabela okuningi kokubili emaceleni amaKristu namaSulumane ukuthi izenzakalo ezithile ziwubufakazi bokugcwaliseka kweziprofetho zabo. Umbuzo engingathanda ukuwabuza laba bantu yilokhu okulandelayo: ingabe kukhona inkukhu ehambahamba ngokufakazela ukuthi iqanda laliqale lapho? Ungase uthole ukuthi umbuzo ongajwayelekile, kodwa lokho engikushoyo ukuthi ukuthi iziprofetho zigcwaliseka akuqinisekisi ukuthi inkolo yakho iyiqiniso. Mhlawumbe labo bafundi kufanele baqale bazibuze ukuthi abafuni yini ubufakazi balokho abakhulisiwe kusukela ebuntwaneni. Ngiphinde ngikhuliswa ngezimfundiso zobuKristu, kodwa uma unezinhlobo zokucabanga ngaphandle kwebhokisi lakho, ngeke ukwazi ukunamathela ebhokisini lakho elidalwe ngaphambilini. Ukwesaba ukushiya i-bubble yakho yamaKristu noma ukwesaba ukudlula ibhola lakho lama-Islamic kususelwa kokwesaba isijeziso esihogweni futhi ulahlekelwa umklomelo omkhulu ngemuva kokufa. Ngiyaxolisa, kodwa wonke umuntu ongenaso isibindi sokucabanga ngaphandle kwalezo zinhlaka eziyisisekelo, ngombono wami, u-scared hare.
Lapho iziprofetho zigcwaliseka, abaningi babona ubufakazi bokukholwa kwabo. Isibonelo, chofoza lesi sixhumanisi ukubona ukuthi oFakazi BakaJehova babheka kanjani izenzakalo ezithile njengoba iziprofetho sezigcwalisekile. Ngezansi lesi sixhumanisi uzothola isishwankathelo esifushane salokho umbono wamaKristu okhona ngeziprofetho ezizogcwaliseka; waphawula ukuthi uphinde waba nempikiswano phakathi kwazo zonke izinhlobo 'zokunyakaza kwamaKristu'. Inhlangano ye-Evangelical noma iBaptisti iphinda icabange ngokuhlukile ngomgqa wesikhathi wezenzakalo kunamaKristu aguqukile futhi ngale ndlela ungenza uhlu lonke lokungafani emibonweni, ngokusekelwe ekuchazeni kwezinguqulo zeBhayibheli. Sibona okufanayo ohlangothini lobuSulumane ngakho-ke ubone empeleni ukubuka okuhambisanayo nokuphikisana kuzo zonke izinkolo ezinkulu emhlabeni. Khona-ke kukhona ukufana okuningi phakathi kuka-Islam, ubuJuda nobuKristu. Ngishiya eceleni kwezinye izinkolo ezinkulu emhlabeni lapha, kodwa ngokuyisisekelo sibona izimiso eziyisisekelo ezifanayo yonke indawo ngendlela ehlukile. Nokho, lezi zintathu ezibalulwe yizo zonke izinkolelo zika-Abrahama. Nokho, amaSulumane akholelwa ukuthi ukholo lwabo lulungisa lokho kobuKristu, futhi amaKristu akholelwa ukuthi amaSulumane amelela ukholo lomprofethi wamanga.
Kancane kakhulu, lokhu kungukuthi umehluko obalulekile phakathi kuka-Islam nobuKristu (lapho ungasho khona ukuthi ubuKristu buhlobene kakhulu nobuJuda, ngoba kunjengokuthi ukholo lwamaJuda luyingxenye yecebo likaKristu lokuphela kwesikhathi):
AmaSulumane akholelwa ngesisekelo seKoran ne Sunnah (Hadithi):
Ekufikeni kweMadidi ("othembisiwe", "oletha ukuthula" noma "oyishumi nambili imam" noma "imam efihliwe".)
Ekufikeni kuka Isa (Isa isi-Arab for 'Jesus'.)
Ekufikeni kweDajjal. "umkhohlisi omkhulu ozofika phezu kwe-mule."
AmaKristu akholelwa ngesisekelo seBhayibheli:
Ekufikeni 'komprofethi wamanga'
Ekufikeni kukaJesu Kristu, ngubani ozokwakha umbuso wezwe omusha.
Zombili izinkolo zikholelwa ekubuyiseni kukaJesu futhi bobabili bakholelwa ekufikeni kuka-anti-Kristu; obizwa ngokuthi uDajjal ku-Islam. Bheka isibonelo le movie ukuze uthole umbono walokhu.
Lokho engizama ukukwenza ngezihloko zami ukugqugquzela umfundi ukuba acabange ukuthi iziprofetho nokuthi zigcwaliseka kanjani akuzona isibonakaliso sokuthi kukhona iskripthi esikhulu. Amakholwa ezinkolo ezahlukene afuna ukuhambisana nalokhu. Kodwa-ke, ke baqinisekisa ukuthi iskripthi silawulwa unkulunkulu wabo; noma unkulunkulu weBhayibheli noma Allah (esimweni samaSulumane). Kodwa-ke, ngizama ukukhuthaza abafundi ukuba bacabangele ukuthi iqiniso elilula ukuthi sibonakala sishumayeza iskripthi asikhombisi ukuthi uhlelo lonke luhlelwe ngaphambilini nokuthi siphila esimweni esibukeka simulative (ngokulinganisa). Kungenzeka ukuthi ukuphuma kweziprofetho akusho nje ukuthi umkulunkulu wakho othize nguye oyedwa weqiniso, kodwa ikakhulukazi ukuthi kufanele kube 'unkulunkulu'? Kungenzeka yini ukuthi lo mkulunkulu uye wakha ngokucophelela lo script ngendlela yokuthi izinkolo eziningi zidinga ukudala amaphuzu amaningi kanye nokunciphisa okumele agcwalise leyo mpi yokuphela kwesikhathi? Kungenzeka yini ukuthi lo script wakhiwe ngendlela yokuthi kuzo zonke izici zomphakathi ubuqili obudingekayo ukuze kuqhutshekwe okwamanje ku-1 (njengamanje ngokuqondile kusuka ebhetri nge-plus and minus pole)? Kungenzeka yini ukuthi umthwalo wenkolo wobunikazi ocabanga ukuthi uwuthola ngenqubo yakho yenkolelo evela encwadini yakho engcwele kudingekile ukukukwenza ube yingxenye yalezo ziphikisa?
Uma i-quantum physics ibonisa kakade ukuthi umuntu obukayo uyadingeka futhi uma kunezinto eziningana zokutholwa kwe-physics ye-quantum kubonisa ukuthi kuyadingeka ukuthi umuntu obheka izinto ezibonakalayo enze umhlaba, ngakho-ke, kanye nalabo baprofetho benkolo, akuyona inkomba yokuthi sisekhona ngempela ukuphila kokulingisa? Ngibhala uchungechunge oluthe xaxa ngalokhu lapha en lapha uthola. Kuhle ukuchaza ukuthi kukhona unkulunkulu oyisibonelo sokufanisa. Lokho kungukuthi umakhi walesi siminganiso. Kuhle futhi ukuchaza ukuthi kuneziprofetho ezigcwalisekile kakade futhi lokho kuzodingeka zigcwaliseke. Lona yilo script noma ikhodi yomthombo yokufanisa. Uma sicabanga ukuthi kungumlingisi we-multi-player, khona-ke kubheka okulinganayo okudingekayo kubo bonke ababambiqhaza (iNtaba Everest kumele ibe endaweni efanayo kuwo wonke umuntu). Lokho kuchazwa yi-quantum entanglement kusuka kwe-physics ye-quantum futhi sithola ukuthi isimiso esiyisisekelo kulokhu Inqubo ye-anchor ye-Google esiteji sayo sokufanisa (ngokoqobo okungathandwa kwabathengi). Ngakho-ke kukhona izinkomba eziningi ukuthi siphila ngokoqobo lwe-matrix futhi ukuthi umdlalo we-multi-player. Ngakho unga of fikela esiphethweni sokuthi kufanele uqhubeke nokulandela umbhalo wenkolo yakho ngokusekelwe ezinkolelweni zakho of ungafinyelela esiphethweni esihle kakhulu.
Incazelo yenkulunkulu ngu: UNkulunkulu ungumakhi wokufanisa
Yisiphi isiphetho esinengqondo ngaleso sikhathi? Ukuze lokho kuqala kufanele ufunde uchungechunge lwama-athikili wami mayelana nokulingiswa. Uma uqala ukubona ukuthi kungenzeka ukuthi siphila ekufaniseni, khona-ke ungase uqonde ukuthi ukufanisa kufanele njalo kuhloniphe ukukhetha okukhululekile. Ungathandaumthetho wenkululeko yokuzikhethela'ungabiza, ngoba ngaphandle kohlelo lokuzikhethela uhlelo alulona ukumbumbuluza, kodwa empeleni luhlobo lwefilimu lapho umphumela wakhe usuvele uqinisekile. Kodwa-ke, okuyisisekelo sokulinganisa, ukuthi uhlinzeka abadlali inselelo futhi bafuna ukuhlola ukuthi badlala kanjani umdlalo. Isibonelo, awusakheli simulator yendiza ukwenza indiza ibheke futhi ikwazi ukuhamba nge-autopilot, uyayakha ukuze uhlole umshayeli. Esikhathini sokumlingiswa kwamadlali amaningi ufuna ukutadisha ukuthi abadlali baziphathe kanjani ngabanye futhi bebonke futhi babone ukuthi yiziphi izinqumo abazozenza ngabanye futhi ngokubambisana. Kodwa-ke, ungafaka izinhlamvu ezingezona umdlali ekulandiseni okulandela iskripthi esithile bese uzama ukuqinisekisa abadlali emdlalweni ukuthi balandele leso script. Ingabe mhlawumbe siyaqaphela indima yabaholi bezwe bezombusazwe nezenkolo lapho? Yebo, njengoba ngikhathazekile.
Kuthiwani uma umakhi we-simulation ethemba ukuthi abadlali banikezele ngokuzithandela komgomo othile wokuphela? Khona-ke kumele abeke abalingiswa abangewona umdlalo emdlalweni ezindaweni ezibalulekile futhi baqinisekise ukuthi abadlali abangadlali iskripthi ngokwemibandela yama-avatars abangewona umdlali (awabeka emdlalweni) bathola amaphuzu angaphansi emdlalweni. Ngakho-ke umakhi we-simulation wenza kube mnandi ukudlala umdlalo ngokwemithetho. Kungenzeka yini ukuthi ufuna ukufezekisa umphumela othize othanda kuye ngaphandle kokuphula umthetho wenkululeko yokuzikhethela? Ake sithi sibhekene nokuhle i-teaser movie ziye zalingwa kulokhu okufaniswayo, kepha kuphela ngaphakathi kokumbumbuluza kufika ekutholeni ukuthi akujabulisi futhi kujabulise kancane; ukuthi singagula, siye empini, kufanele sisebenze, singaqhubeka nokunye okunye? Kungadingeka sidlale lo mdlalo, ngoba sesayine isivumelwano sokuyidlala. Kodwa-ke, uma umakhi we-simulation esisihle futhi usacindezela ukuba simkhonze ngokuzithandela ngaphakathi kokumlingiswa, khona-ke usahlonipha intando yokuzikhethela, kodwa kungenzeka ukuthi siqaphele futhi sizibuze ukuthi akanalo yini imigomo embi unayo.
Ngombono wami, lokhu ukufaniswa kulawulwa yi-avatars (abakhi abaqhutshwayo, abadlali abadlali) ngendlela ethile. Bazama ukuqondisa iskripthi ngendlela ethile ngokusebenzisa izinqubo zenkolo nezombusazwe ngokusekelwe kokubili (ngoba ubumbano lunikeza ngokuqondile umzila oyifunayo). Ngombono wami, umgomo omkhulu ukuzinikela ekuhlanganiseni uhlelo lwe-AI lomakhi; ngamanye amazwi: ukujula okujulile ekufaniseni. Ezinkolweni sithola lokhu 'ekuphileni okuphakade'. Ku-transhumanism (bheka i-CEO ye-Google uRay Kurzweil) lokhu kubizwa ngokuthi yiyodwa. Ukufika komuntu ophikisana noKristu noma kaMesia ovela emoyeni (ifu) kulula ukufeza. Ngale ndlela, umakhi womdlalo angenza i-avatar ibonakale emdlalweni kalula. Uma uqala ukukubona konke kusuka kulolo mbono, uzoqala ukuqaphela ukuthi ngempela uhlobo lomdlalo we-Sony Playstation we-hyper-real, lapho udaba, umuzwa, imicabango kanye nakho konke okubonayo kubonakala ngomphefumulo wakho (umbonisi / umdlali) ngokusebenzisa avatar yakho emdlalweni (umzimba wakho). Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uyenze 'ukuhlolwa kwesibindi slits' uyaqonda kahle.
Ngakho-ke uma ukholwa ukuthi ungakwazi ukuzuza ukuphila okuphakade ngokuzinikela kunkulunkulu wenkolo yakho, wenza iphutha elibalulekile ku-2. Ukuze uqale, uhlala kuze kube phakade futhi ungumdlali kuphela wokulingiswa kwabadlali abaningi. Futhi phawula ababili ngaleso sikhathi ukhona enkonzweni yokubeka iskripthi esinenjongo yokukuxhuma nakakhulu ngokwengeziwe nomakhi walesi simulation. Manje ungasho ukuthi:Yebo, kodwa unkulunkulu wami unenhloso enhle kuphela!"Kulungile, ngakho konke ukubulala nokubulawa kwabantu, ukugula, ukusebenza ngemali nobugqila kwakungadingeki. Uzinikezela ohlelweni lwezinsizakalo ngezici ezihle nezimbi. Umakhi walesi simulation ngokucacile unenhloso embi; okungukuthi lapho kufanele sizinikezele futhi sibe ngokuxhomeke kakhulu. Uzama ukufeza lokhu ngokusebenzisa iskriphthi kanye nabaqondisi abaqondisayo bale script; ama-avatars abekwe nguye kulokhu okufaniswayo (okulawulwa nguye) ezindaweni eziphezulu. Noma ubani ozibeka enkonzweni yalezi zindlela zokubambisana ngokusebenzisa izikhundla zokuphatha futhi wonke amamaki angezansi anikezela ekugcwalisekeni kwesibalo sobugqila. Ngakho-ke indlela kuphela yokunikeza iskripthi umphumela umakhi wesimulator ofuna ukuyeka ukusebenza kulo script. Funda qhubeka lapha ukuthi ungakwenza kanjani lokho.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: i-jw.org
Funda konke mayelana 'nokuhlola okuphindwe kabili' nokuthi siphila ekufaniseni: ukufinyelela okuvulekile
Positivism kanye nethemba!
U-Elon Musk mayelana nenkolelo yokulinganisa, ithemba kanye 'nohambo'
Amathegi: anti-christ, UbuKristu, I-Dajjal, phakade, afakiwe, ukholo, ukukholelwa kwenkolo, Isa, islam, UJesu, ukuphila, iziprofetho, Inkolo, ukulingisa, ubuningi
17 Juni 2019 ku-20: 47
Njengoba uDavid Icke wake wachaza:
Ukuthi abantu banokholo oluthile kungamaphesenti angu-99,9 amacala ngoba abazali babo kanye nemvelo yabo / isiko babe nenkolelo.
Akunjalo ngoba babeqhathanise zonke izinkolo futhi ngaleyo ndlela baphetha ngokuthi iyiphi "inkolo" enhle.
Ngaphezu kwalokho, ngikholelwa ukuthi ngoba abantu bakholelwa ukuthi iziprofetho zigcwaliseka, lokhu kwenzeka futhi kuqinisekiswa.
Yisho uhlobo lomthetho wokukhanga (imicabango / izinkolelo zakha iqiniso).
17 Juni 2019 ku-23: 24
Isihloko esibucayi, ngihlale ngitshela ukuthi lokhu kuyisikripthi esizigcwalisayo, uhlelo olwenziwe ngabathembekile. Lucifer, nakuba ngingadingeki ngenze noma yini, ngikhetha ukukhetha futhi imiphefumulo iya ekukhanyeni kwamanga njengezimpukane.
(noma umbono noma ukubikezela) okumele kutholakale ukuthi kulungile noma kufezeke ngenxa yokuziphatha okubangelwa ukuboniswa kwayo.
ukulindela ukuthi into embi ingaba isiprofetho esizigcwalisayo
Impendulo kuphela elungile akumele idlale 🙂 #noncompliance
23 Juni 2019 ku-15: 04
Akudingeki ukuthi ukondle isilo (ukwesaba), esinye isibonelo sokuthi ukujwayelekile okusolwa kanjani abameleli beskripthi sabantu badlala abantu.
18 Juni 2019 ku-01: 15
Yileyo yonke indlela uMartin!
Uma ngabe konke kwaba lula ngakho-ke bekungeke kube khona iphuzu noma.
Futhi vumelana noDanny, uzobe uhlelelwe uhlelo lokuqala lwe-7 empilweni yakho. Uma ufuna ukukhipha lokhu, kufanele uphinde uzenze kabusha. Lokhu ngeke kusebenze uma uhlala ebhokisini lakho elithembekile.
Uma abantu noma amaqembu bonke bakholelwa ku-script efanayo, khona-ke kuzokwenzeka ngempela.
Ngiyakholelwa futhi kimi, kodwa ngeke ngihlale kule planethi kuze kube phakade.
Ngiphindela emuva ekuqaleni kwami ​​ngukusaba / ukufa.
18 Juni 2019 ku-11: 34
Ukusabela okuvela kubafundi abavela phezulu lapha okokuqala futhi abonisa ukuthi abazange bathathe inkathazo ukufunda izihloko ezixhunyanisiwe (ezixhunyiwe) futhi abonisa ukuthi abafuni ukubuka ngaphandle "kokuthembela eNkosini" futhi ukholo "(noma kunalokho ukulula ukuhlala nomzwelo omdala) akuvunyelwe.
Ngichitha isikhathi esiningi ezihlokweni zami futhi angiphenduli ku-Febo snackers.
19 Juni 2019 ku-05: 26
Lokhu kuyamahloni ngokuthi izimpendulo ezivela kuzo zonke izinhlobo zabantu zivame ukunikeza umbono ongcono wokuthi abantu bakuphi okubhaliwe okubhaliwe. Banjengesibuko sesihloko sakho. Ngokudlulisela imibono equkethe yonke into, isibuko sivame ukumbozwa. Ngaphezu kwalokho, i-FEBO ine-croquettes enhle kakhulu ye-satay.
19 Juni 2019 ku-10: 59
Zonke izinhlobo zokuziphendulela kwi-intanethi ayisekho isithombe esilungile, ngoba sigcwele abagcini be-intanethi be-ajenda; kungakhathaliseki noma cha kufihliwe ngemuva kokujula iphrofayela ye-Facebook nge-depthfakes yenethiwekhi yomphakathi.
Ungashiya imibono ngaphansi kwezihloko ze-propaganda ze-Telegraaf? Cha.
Uma abantu bengenzi imizamo efanele yokufunda izihloko zami ngokufanele futhi bafunde ukuqinisekiswa, ngeke ngivumele ukuphendula okunjalo kudlule. Ubani olawula lewebhusayithi? Wena noma mina?
18 Juni 2019 ku-15: 55
Isihloko esihle. Ngicabanga ukuthi bonke abafundi baqonda ukuthi usho ukuthini. Lokho nje umbuzo.
18 Juni 2019 ku-22: 22
Lokho kuchaza ngokuqondile ubuthakathaka bezinkolo esimweni samanje. Uma ufika ngendaba ecacile, abantu bayashintsha, babuye masinyane umsindisi bese beyibuyisela ngaphandle kwabo ngokwabo.
Ungabathumela nabo kwi-forum ye-xandernieuws ye-faith 😉
18 Juni 2019 ku-22: 24
Noma bekubekiwe, ngifanele ngiqhubeke ngisebenza ku-Dutch my yami
19 Juni 2019 ku-19: 19
Kulungile, izitatimende ezihle kakhulu. Kuthiwa abaningi banamabhubhu abo futhi abakwazi ukuphuma. Kodwa-ke, abanye abantu bakhululiwe kusuka kumabhubhu abo ... kodwa ke 'abapheli' ngokuzenzakalelayo nombono njengoba uchazwe nguwe (nangamazwana) (= empeleni i-bubble? Kodwa uhlobo oluhlukile lwebhola?).
Yisho ikholi, noma uyibize "iqiniso ngaphandle kwethu" ... kodwa
- Awudingi ukwenza okungcono kakhulu kokuhamba kwakho okuhle okulandelayo; lokho kunenkani kuyinto ejwayelekile yezinkolo zenkolo, futhi kuqinisa ukucabanga kwamandla
- Akukho ezulwini noma isihogo nhlobo. Cha, kuyoba khona umhlaba ovuselelwe / obuyiselwe
- Buka imibono ngemuva kwalesi sihloko, bese ubheka ngokulingana ngangokunokwenzeka lokho okudingayo ukukholwa okungaphezulu nokucabanga okuzokwenza ... IBhayibheli, noma leyo mibono okukhulunywe ngayo?
- Kukhona "i-Universal Truth" ngaphandle kwethu, ekugcineni akuqhutshwa yi-Lucifer-in-a-simulation.
- Kukhona uNkulunkulu owenze uhlelo lwe-Era.
- Naphezu kwamaphutha amaningi okubonakaliswa ekuhumusheni nasekuqulunqweni kanye nabancane ezincwadini ezithile ezingcwele ungazi ukuthi manje sisephakathi kwe-5 eras. I-2 eras engezansi yenzelwe ukwakhiwa nokulungisa !!
- Ngakho ukholelwa ukuthi "i-eon evuthayo" yamanje, "abantu abangabonakali" babhala futhi bagcwalisa umbhalo? Futhi uma kwakunjengokulinganisa, kwakuzodingeka kube "uhlobo lomuntu" njengezilwane ezilawulwa ngenduku yokulawula? Zingaki "izinkolelo" sezivele zikhona kulokhu ...
- Cha, kusho uNkulunkulu ohlosiwe, okuhle nokubi bobabili banendima yabo kulokhu ... nangenhloso.
Ukufunda konke, ukususa imizwelo nokuthola "," ngifinyelela esiphethweni sokuthi, uma kuqhathaniswa "nezinhlobonhlobo" eziningi ezikhulunywe ngazo (ngakho-ke amaphuzu akho okuqala uMartin), kukhona iqiniso leNkulunku- lu kaNkulunkulu oyedwa owayehlala yedwa ngaphambi kwaleso sikhathi -of-iminyaka ekhulelwe yimuphi umuntu nokuhle nokubi njll kunendawo yokulandela (ngakho-ke lo Nkulunkulu) avela kuzo zonke-kuye ngokwakhe kubo bonke-ku-wonke ngokusebenzisa ukwakheka kulokho ngokuhlela ngaleso sikhathi ...., ukucabanga okuncane noma inkolelo kuyadingeka kunazo zonke ezinye izinto ezingafani nesisekelo seBhayibheli.
Ngakho ngikuphendulela umbuzo: Kungenzeka yini ukuthi kukhona iqiniso elilodwa (uNkulunkulu) eliqondisa abantu ukuba basebenzise uhlelo / iskripthi saKhe? Ngakho iQiniso (i-Standard) engaphelelwa isikhathi futhi ngaphandle kwethu? Iqiniso likaNkulunkulu elizobuyisela konke okungcono kumfanekiso wakhe?
Noma unayo ama-100,0% amaqiniso afakazela ukuthi kunoma yikuphi okungaze kube njalo?
19 Juni 2019 ku-20: 24
Leli zulu elisha nomhlaba ukufaniswa okusha (ngaphakathi kwalokhu kuboniswa) lapho umakhi walesi simulation (Lucifer) ufuna ukusondela kithi.
Ayikho inkolelo. Ukuhlolwa kwe-physum ye-physum kubonisa ukuthi siphila ekufaniseni. Lokhu akuyona indaba yokuchazwa noma inkolelo.
Kodwa wena ubambelele kuNkulunkulu noJesu. Kungani? Ngoba uyesaba ukuthi uzolahlekelwa izulu elisha nomhlaba omusha? Ngingasho ukuthi: faka uRay Kurzwel, u-Elon Musk nawo wonke ama-pawn asishukumisela ukuba sibhekane nobunye. Lezo zulu elisha kanye nalesi simo esisha kungukubodwa (isithembiso 'sokuphila' kokufaniswa okusha).
20 Juni 2019 ku-06: 49
Uma ungafuni ukuzifihla (njengami, njengoba ubonisa) kusuka kulokho okubizwa ngokuthi "lokhu okufaniswayo" khona-ke uyaqhubeka nokulinganisa okulandelayo, njengoba ubonisa (izulu elisha noMhlaba omusha owawethulwa). Ingabe abaphathi baseLuciferian balowo mboniso ngeke bafe kanye? Noma ingabe iba nabazuzi kahle? Futhi "abaphikisi" njengami bafa ngolunye usuku, akunjalo? Noma ufa enye inqubo?
Yeka indlela engapheli ngayo ukulingiswa kwethu kwamanje?
Umbuzo ofanayo: Kungani wena, kanye nabamukeli bokubhala kwakho (bheka imibono) namanje kuwo? Akuyona leyo smart noma kunjalo?
Ingabe "okunye okunye" (uyangena nini) kuze kube phakade? Noma kwenzekani lapho? Uzofa (uma ufika lapho) kanye? Noma ingabe ayikho inkinga lapho?
20 Juni 2019 ku-09: 09
Angicabangi ukuthi uyaqonda ukuthi ngithini.
Ukufa ngaphakathi kokufaniswa kungalinganiswa nomsakazo esikrinini somdlalo we-Playstation ofa. Umphefumulo awufi.
Kubonakala sengathi unamathele emcabangweni ohleliwe ngaphambilini ukuthi kumele kube khona unkulunkulu omuhle. Umakhi wokufanisa ukuthi mina nawe manje sidlala kungabonakala njengoLucifer (okungenani kusuka esimweni sethu se-avatar). Lokho kungamane kube uMark Zuckerberg wezingqimba ezingenhla (mhlawumbe owokuqala).
Umbuzo othi ubani owakhiwe isendlalelo sangempela nokuthi ngabe ungunkulunkulu oyedwa noma ngabe konke okuvela kumhlobo wokusakaza kwedatha konke okuhlangene akukwazi ukuphendulwa kusuka esimweni sokulinganisa / avatar (ngaphakathi komdlalo). Bese uyakwenza ngezincwadi nolwazi olutholakala emdlalweni (njengeBhayibheli). Ngubani othi imininingwane yesevisi ilungile?
Into kuphela esingayenza yizivivinyo eziholela ekuhlaziyweni kwesimo sethu. Lezi zivivinyo ze-physics ze-quantum zifakazela ukuthi siphila ngokoqobo (okuba ngabamangali / abadlali). Nakulokhu: lokho akusiyo inkolelo, kuyisinyathelo esilandelayo nesilingo nesinyathelo sokuphutha ukuze uthole ukuthi yikuphi ukuhlala kwethu lapha.
19 Juni 2019 ku-23: 39
Kungani uJesu athi eBhayibhelini "ungakheli indlu yakho kulo mhlaba"? Lokhu kusho ukuthi indawo yesikhashana. Ngamanye amazwi, ungalahlekelwa ngumphefumulo wakho lapha emhlabeni. Uthi futhi 'sekuphelile' futhi akuphelelanga lapho usuqedile ukuqeda igama likaNkulunkulu. Awukho kuleli sayithi ize futhi usengakholelwa kuJesu. Uma ufuna uJesu abuyele emhlabeni, kumele uqinisekise ukuthi uba nguJesu. UMartin uthi ufana noJesu futhi ngeshwa usahlushwa abantu abaningi.
Uma ushintsha igama elithi uJesu eBhayibhelini ngoKristu-ukuxolisa, ulwazi oluyingqayizivele ngaphakathi kuwe lapho ude kakhulu kakhulu.
UJesu akazange akhathalele lokho abanye abakushoyo futhi batshele ukuthi yikuphi ukwaziswa akuthola ngaphakathi. Lokho kusho ukuthi uphakama phezu kwezwe nemithetho yalo. Izwe lizokuzonda ngoba lingenalo ithonya.
UJesu waphambana noNkulunkulu walesi simiso esiyiqiniso, okusho ukuthi Lucifer ungunkulunkulu walesizwe.
U-Lucifer uyisidalwa esingumuntu ohlukanisile naye, kungathi kithi noma sihlukile.
20 Juni 2019 ku-06: 58
Lezizinto ezinhle kakhulu ozishoyo; ngokusho kwami ​​imibono yethu ihlukile kunalokho ocabanga ngakho.
Kodwa njengoba nami ngiphendula kuMartin: nawe "uhlezi" lapha. Ilungelo elincane elingahlakaniphile? UJesu noma cha, u-chris-consiousness noma cha .... Kulesi sikhathi asikwazi ukuya esigabeni esilandelayo (ngaphandle kwalokho uzobe u-quadratic uzwela ukuthi uzigcine kulezi zindezi ukuze "ushumayele" us ...).
Okungenani ungathola isiphetho sokuthi kukhona "uMholi" lapho sibona "ukuklama okuhlakaniphile" endalweni. Ngakho-ke, kungcono kakhulu ukuthi lo Mholi uzosithatha kulesi sigaba esilandelayo (ngezinyathelo zokuthola kabusha).
Futhi lokho engikushoyo kuGuppy wukuthi uyazibuza: yikuphi okudingayo ukuthi udinga ukholo nokucabanga okukhulu?
Siyabonga ngokuhlala kulokulingisa ... ... okungenani singashintshanisa imibono kulezi zindaba.
20 Juni 2019 ku-10: 23
Uma ngabe ufunde indaba yami ngendlela efanele, ukudlala kulokulingisa akuhlangene nokuzwelana uma usayine isivumelwano sokudlala lesi simulation. Kodwa-ke, angifuni ukuqondiswa ukulinganisa okulandelayo nokuwa ngama-avatars omakhi walesi simulation (njenge-avatar uJesu) futhi ngokuqinisekile angathembeli ngokucophelela ezincwadini ezimbalwa ezinhle (njengeBhayibheli) elungiselelwe ama-avatars umakhi walesi simulation.
Iphuzu ukuthi ukhumbule ukuthi awulona i-avatar yakho, kodwa umphefumulo wakho. Lokhu kubonakala ekuhlolweni kwe-quantum physics.
Ngiyaqonda ukuthi kulula ukuhlala futhi ulinde uJesu bese ngethemba ngezulu elisha nomhlaba omusha. Kulungile futhi? Futhi-ke? Ukuphila ngaphansi kobugqila balowo onkulunkulu abahlubukayo? Yini ofuna ukuyenza sonke lesi sikhathi kulesozulu ezulwini nomhlaba omusha? Ungalima kanjani ingadi yakho? Noma ubusa noJesu esihlalweni sobukhosi eJerusalema embusweni wezinkulungwane zeminyaka wokuthula? Ubusa phezu bani? Kukhona into elincane kuyo (njengaleyo ... "haha, ngiyakwazi ukubusa kahle noJesu phezu kwesixuku sonke").
20 Juni 2019 ku-10: 46
Ngicabanga ukuthi uvuselele izikhathi eziningi kuze kube yilapho uqaphela ukuthi lokhu kuyinkolelo. Lesi yisikhathi esihle sokuthola lonke ulwazi olutholakala naphezu kwazo zonke izinzwa.
Lokhu kungukugcina kokugcina kukaMartin nami kanye nabanye abaningi. Uma ufuna amandla nodumo ungahlala lapha (kuze kube phakade) kodwa uma ungaqapheli ukuthi iyinkohliso ngakho ayikwazi ngempela ukujula.
Ulapha ukuvula lezi zimpawu eziyisikhombisa, ama-chakra ayisikhombisa, ukuze ziphakamise ngaphezu kukaLusifer. Lokhu ngeke kukusindise ngezinkolo ezintsha zeminyaka kanye ne-yoga njalo ngesonto. Uzosindisa lokhu ngokuphuma ebhokisini bese uqoqa ulwazi olubalulekile. Asizange siphumelele kulokhu ekuphileni kwethu okudlule, yingakho sisekhona lapha.
Sonke isikhathi sokufunda, ngoba isikhathi asikho.
Ngaphezu kwalokho, kumele siqaphele ukuthi i-ego yethu (kusuka ku-avatar yethu) enkulu kangangokuthi sifuna ngempela ukuhlala lapha.
Ngicabanga ukuthi ungahamba kuphela uma ufuna ngempela ukuyeka.
Lokho kakade kuyinselele enkulu.
20 Juni 2019 ku-11: 15
UMartin / Guppy, ngiyabonga ngezindlela ezehlukene. Ngizopaka lokhu okwamanje.
Ngombono wami, unolwazi olwanele lwezingqikithi eziningi ozimele uzenze kuqala bese ulondoloza umbono wakho; kuphela ucezu lwe "physics proof" alanele ukwenza yonke indaba iboneke.
Ungase futhi uthi lokhu "ngemfundiso yokuthola zonke izinto."
Nakuba anginakho konke okwamanje okwamanje, ngiyazi ukuthi izinto eziningi ezinjengezo engizisekelayo nazo zingabonakaliswa ngokomqondo. Ngaphezu kwalokho, ungabonisa umugqa oqakathekileko eBhayibhilini ovela emajukwini ahluke khulu (cabanga ngendlela ehlanzekileko ye-gematria / script-with-script eqhathanisa nemithombo ezizimele / i-historiography yabanye abantu njll.)
Kungcono kuwe ukuthi lokhu kuyindilinga yakho yokugcina. Angazi ukuthi bangaki ama-rounds engizoba nawo ngaphambi kokuba ngikuhlangabeze. Ngombono wami ngokuqinisekile sizobonana "esikhathini esizayo".
UMartin, ukuphendula kwakho kokugcina sekuwile ... (hoeing / tyranny njll ...); Okungenani, ngiphetha ngokuthi kusekhona indawo yokuthuthukiswa ekutadisheni lezi zinkinga.
Yiba nohambo oluhle ndawonye !!
20 Juni 2019 ku-11: 24
Cha, angihla. Ngibhekisela esiprofethweni seBhayibheli sombuso wezinkulungwane zeminyaka wokuthula.
Kuyinto isiprofetho sombuso wezinkulungwane zeminyaka lapho uJesu ezobusa nomlobokazi wakhe (noma wonke amakholwa, isonto lakhe, "isonto" noma noma ngabe ufuna ukuyibiza).
Lokhu kusho ukuthi amaKristu azibheka njengabakhethiweyo. Manje; Ngikholwa ukuthi lokhu kuzogcwaliseka uma siqhubeka nokulandela iskripthi bese siqeda esigabeni sokudlulisa lapho wonke umsizi weLucifer (ukholelwa lapha lapha uJesu, avatar kaLucifer) azothola umzimba omusha (avatar ye-nanotech-built-avatar).
Nokho, lokho kungukuqala nje. Ukulinganisa konke kuzokwenza ushintsho (izulu elisha nesiprofetho somhlaba omusha).
Akudingeki uvumele ukuhamba kwakho kokholo lwakho kimi, kodwa ngikuthola kunzima kangangokuba wena (nabanye abaningi) unamathele kuso. "Umsindisi uvela phezulu". Kungaba kuhle uma uqonda ukuthi ikholo lakho liyingxenye yobuqambi obudingekayo ukugcwalisa leso script sesikhathi sokuphela (nakho konke okulandelayo - njengaleyo mbuso wokuthula, njll). Ukholo oluyimpumputhe kakhulu kulowo onkulunkulu ononya, uma kudingeka, kufanele abone igazi ukuthethelela izono. Kwakumnandi ukuthi uzobe esekela indodana yakhe siqu (i-avatar ekufaniseni); kodwa woza ... yenza kube lula kuwe. Abantu bayakuhlala isikhathi esingakanani ukuqhuma kulolo ndaba?
Yimuphi unkulunkulu ofuna ukubona igazi? Ungesabi ukuphuma kuKristu wakho u-bubble.
Into embi ukuthi lezo zinkolelo zenkolo zigcina umbhalo. Yingakho ngiqhubeka ngifakazela lokho.
20 Juni 2019 ku-11: 58
UMartin, ngiyahlonipha amakhono akho okuhlaziya aphethwe yizihloko zakho. Kodwa nxazonke zobuKristu awutholi ngaphezu kolwazi olusetshenziswa "95%" lamaKristu. Kodwa "izisekelo" eziningi eBhayibhelini zihluke kakhulu.
Kancane kancane mayelana nombono wakho: yikuphi amaLuciferianist aphinde aphinde abuye nawo? Ingabe bahlala esikhundleni sabo njengababusi?
Futhi uphelela kuphi ngemuva kwe-85e yakho? Futhi yikuphi ukuchitha kwakho kwansuku zonke lapho?
20 Juni 2019 ku-14: 07
Ngaphandle kwalokho qalisa iwebhusayithi lapho singafunda khona imibono yakho ethakazelisayo, ngokusobala unokuhlakanipha okuningi ekuqashiselweni futhi kungaba yinto ehlazo ukubona ukuthi ilahlekile. Ngifuna ukwazi ...
20 Juni 2019 ku-21: 45
Imibuzo oyicelayo ayimangazi, ngazibuza. Ukuthola izimpendulo akulula futhi ngithola impendulo kuphela lapho ngifunda ukucabanga ngaphandle kwebhokisi.
Ucabanga ukuthi kungani abaholi bezwe befuna ukugcina impahla yabo emndenini? Ngaphezu kwalokho, balondoloza i-bloodline ngoba i-DNA yabo ihlelwe ukugijima kuleli zwe njengalokhu likhona manje.
I-DNA yethu kumele iphinde ibuyiselwe ngokuhlukana kusuka ekuqaleni.
Leli lizwe ikhophi futhi uphendule umbuzo wakho okwenzayo ezingeni eliphakeme: kufana nokudala amazwe lapha ngokucabanga. Kodwa ukuze ube nomthwalo wemfanelo kuzomele uqale uhlele ezingeni eliphansi kakhulu. Lena yindlela ewukuphela kokungazilahleki ebugovu njengoNkulunkulu wezwe. Uthi ngesizathu esithi "Kukhona unkulunkulu we-1 kuphela futhi awukwazi ukuthanda omunye unkulunkulu ngaphandle kwami."
Abaholi bezwe bathathele lezi zakhiwo futhi bakholelwa ngempela ukuthi yibo kuphela abangakwazi ukulawula leli zwe futhi bangakwazi ukulawula.
Christian van Offeren wabhala:
20 Juni 2019 ku-15: 46
Ungabe uqokomisa (noma ubheke) uma usuxoxile kakade.
"Umqondo wabunye" uhambisana kanjani nalokhu? (okuvame ukuhanjiswa emphakathini ongokomoya)
Ngakho-ke inkolelo yokufanisa, i-"original" ikhulunywe ngakho
Ngombono wobunye kucatshangwa ukuthi wonke umuntu uyingxenye "yomthombo omkhulu". Futhi ngakho empeleni akunjalo "original" ..? Yonke ingenye futhi yikho konke? Ingabe lokhu kuyinkolelo esetshenziswe kwiskripthi ukuze wonke umuntu abe ngaphansi kwe-1 hat.
Ngifisa ukwazi ukuthi ungayichaza kanjani lokhu.
« Inkinga enkulu, Ukuphendula, Isombululo kuchazwe
U-Anja Schaap angabona izithombe 'kuPhenyo oluceliwe' ngakho-ke akukho PsyOp? »
Ukuvakashelwa okuphelele: 66.962